Mid ka mid ah xiddigaha Manchester United oo noqday bartilmaameedka ugu sarreeya ee Kooxda Paris Saint-Germain – Gool FM
(Manchester) 07 Maarso 2021. Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee ka dhisan dalka Faransiiska ayaa la soo warinayaa inay doonayso in goolhayaha reer Spain ee David de Gea ay bedel uga dhigato Keylor Navas.
Jarriiradda The Sun ee ka soo baxda dalka Ingiriiska ayaa warinaysa in Paris Saint-Germain ay goolhayaha Manchester United ee David de Gea ka dhigatay bartilmaameedkeeda ugu sarreeya ee suuqa kala iibsiga.
Xiddiga xulka qaranka Spain ee David de Gea ayuu Macallin Mauricio Pochettino doonayaa inuu bedel uga dhigto goolhaye Keylor Navas, isagoo Goolhaye De Gea uu 10 sano ku qaatay garoonka Old Trafford.
De Gea wuxuu arkay booskiisa oo cadaadis saaran yahay, kaasoo uu kala kulmayo Dean Henderson, laakiin Goolhayahan qibradda leh ayaa illaa haatan ilaaliyay inuu ku bilowdo shabaqa.
Shaxda rasmiga ah ee Kooxda Liverpool iyo Fulham ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey, xilli Mane keydka la dhigay